तपाई कुन कम्पनीको सेयरधनी हो, र कुन कम्पनीको हकप्रद ठिक ? छान्नुहोस् — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > तपाई कुन कम्पनीको सेयरधनी हो, र कुन कम्पनीको हकप्रद ठिक ? छान्नुहोस्
तपाई कुन कम्पनीको सेयरधनी हो, र कुन कम्पनीको हकप्रद ठिक ? छान्नुहोस्
काठमाडौ । गुडविल फाइनान्सले ६० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्न असार २ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । अब असार १ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र गुडविलको सेयर भर्न पाउनेछन् । फाइनान्सले १०ः६ अनुपातमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरको २७ लाख २२ हजार ५०० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ ।
हकप्रदको बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबीएल क्यापिटल मार्केटले गर्दैछ ।
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक
जेठ मसान्तसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले निष्काशन गर्न लागेको ३० प्रतिशत अर्थात दश बराबर तीनको अनुपातमा हकप्रद सेयर भर्न पाउने भएकान छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गत जेठ ७ गते हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएको बैंकले असार १ गतेदेखि सेयरधनी पुस्तिका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १० करोड ३९ लाख ५० हजार बराबरको १० लाख ३९ हजार पाँच सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ ।
यसका लागि बैंकले ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियूक्त गरिसकेको छ ।
हाल कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको चूक्तापुँजी ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेपछि बैंकको चूक्तापुँजी ४५ करोड चार लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
कामना विकास बैंक
कामना विकास बैंकले असार ११ गतेदेखि ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कामनाले १०ः३ अनुपातमा सेयर बिक्री गर्न लागेको हो ।
बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २४ लाख १३ हजार १३७.६० कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । यो हकप्रद सेयर साउन १५ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । कामनाको हकप्रदमा मंसिर १० गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सेवा विकास बैंकसँग मर्ज प्रक्रियामा रहेका कारण मंसिर १२ गतेदेखि कामनाको सेयर कारोबार रोकिएको छ । यो हकप्रदमा एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लजिम्पाट काठमाडौंबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी कामना विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सृजनाचोक, पोखरा–८ कास्की र यसका अधिकांश शाखा कार्यालय तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी शाखाबाट पनि आवेदन दिन पाइनेछ ।
कामनाको बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यपिटल मार्केट्स हो । हकप्रद सेयर बिक्री पछि कामनाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख ९२ हजार ९६०.९५ पैसा हुनेछ ।
२०७४ जेष्ठ २४ गते ११:५० मा प्रकाशित
बुटवल पावर कम्पनीको एफपीओको नयाँ प्रिमियम मूल्य यस्तो छ !
दशैंमा सुनको भाउ तीन हजार घट्यो, किन्ने हैन त !
‘द १०० हिरोज अफ मधेश’कार्यक्रमको घोषणाः नोमिनेशन सुरु